ခေတ်သစ်ထွေးခံ | ZAYYA
← တစ်ချိန်က ဆောင်းရာသီနှင့် ပုံစံမညီသော ကကြိုးများ
မနက်ခင်းအာရုံ လွင့်ပျံခြင်း နှင့် ကမောက်ကမများ →
မာယာဘုံ ကို ဖတ်တော့
ခေတ်ဟောင်းက ဆိုရှယ်နဲ့ ခေတ်သစ်က ဂလိုဘယ်လ်ကို
စာရွက်ပါး တစ်ရွက်ကွယ်ပြီး ကြည့်ရသလို
ဘယ်လို ပြောပြော ခေါင်းမာတဲ့ ကျုပ်တို့က
မြို့ပြယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာကို ခါးပုံစထဲ
မြို့မငြိမ်းရယ်၊ စတက်ဂတို တေးသွားရယ်
ပေါ့ပ် ဂီတ တစ်မှုန်၊ နှစ်မှုန်ရယ်
မစ်စ် ရှိတ် လုပ်ရောစပ်ထားတဲ့ ဒီယမကာကို
ဆေးဝါး လုပ် – မှီဝဲနေရဆဲ။
လူတကာ တံတွေး မြေမကျဖို့
ပက်လက်လှန်၊ ဖွင့်ဟ နေရဦးမှာ။
ဆက်ပြီး ၊ ဆက်ပြီး ညစ်ထေးနေဦးမှာ။
Filed under mood, poem Tagged with beauty, being, feel, mood, politics
2 Responses to ခေတ်သစ်ထွေးခံ
Hello, Neat post. There is an issue together with your web site in internet explorer, would test this? IE still is the marketplace leader andabig section of other people will omit your excellent writing due to this problem.